Laydhka Warehouse - Abest Laydhka Co., Ltd.
A: aagga saqafka Low
In badan oo bakhaarka lagu dahaadhay 20 feet ama ka hooseeya, design huriyo ayaa ku koobnayn nidaamka dhaadheer toosan caadiga ah. nalalka ABESTTM 20W ~ 60W LED Tri-caddayn waxaa loogu talagalay codsiyada low-bay. Kulan 'qoreysa kulayl sare taago technology la 130lm / W Lumen wax soo saarka, kuwaas oo la kulmi karaan baahidaada dhabta ah. 2ft ~ 5ft (20W ~ 60W) waa bedelka fiican on 2pcs nalalka dhaadheer leh 50% keydinta tamarta.
Lights A2001 UL LED Tri-Caddaynta
A2002 Mini Tri-caddayn Light
A2003 PC Tri-caddayn Light
A2005 PC Tri-caddayn Light
B: Dhexdhexaad / saqafka sare bannaan
Rakiban ee saqafka sare waxaa badanaa adag, si xal dheer nolosha qaab wanaagsan iyo caymiska la huriyo kuu ogolaanaysaa inaad yareeyo tirada ilo iftiin loo baahan yahay. Meyeydaan Long badbaadiyay qiimaha iyo carqalad uu keeno bedelka.
ABESTLED leeyahay xal nalalka ugu wanaagsan ee saqafka laga bilaabo 16 ilaa 60 fiit in height:
1.IP65 Tri-caddayn Light leh 130 ~ 160lm / w oolnimada iftiin, oo waa qumman yahay si loo gaaro dheer ka dhexeeya masaafo iyo midayso nalal wanaagsan.
2.Linear High bay iyo gacanka ku yar yihiin ugu fiican ee bakhaarka, ama hoolalka kale warshadaha, iyadoo 130-160lm oolnimada iftiin sare / w
3.UFO bay sare ku wareegsan ayaa muuqaalka la mid ah bay sare ee dhaqanka, laakiin si ka badan moodada oo iftiimaya. Waxay u dhigantaa 150W, 250W, 400W, 700W iyo 1000W qariyey. A2202 UFO bay sare ku siinayaa xoriyad ay ku doortaan nooca la gashto fiican ee aad shuruud gaar ah. Fursadaha Lens: 60 °, 90 °, 120 °.
A2102 LED toosan High Bay
Luminaires la soo diyaariyeen ah ee 1 luminaire kasta 2 meelaha yihiin xalka ugu fiican xirtey.
In meelaha kuwan, waxaannu ku talinaynaa in our bay toosan sare & bay u yar yahay, iyo UFO bay sare. Our optics sare xaqiijin doonaa inaad hesho iftiin saxda ah ee meesha ku haboon. Waxaa jira optics kala duwan (90 ° 120 °) la heli karo si loo isticmaalo, iyadoo ku xiran dhererka iyo width of gangway ah. The bay sare toosan iyo gacanka hooseeyo isticmaalaa a optic-ciddi Ray in shuqullada ee boosaska ilaa 12 mitir ee height - siiyo a heerka iftiin fiican iyo midayso oo ay la socdaan dhammaan khaanadaha.
A2106 toosan High Bay
Tunable White Laydhka , Tunable White hoggaamiyo Panel , Smart hoggaamiyo Panel Light , hoggaamiyo Tunable , Smart hoggaamiyo Track Laydhka , Smart Siraaj , Dhammaan Alaabada